Ungasisebenzisa njani isichazi-magama kuhlobo lwakho lwePhepha
Enye yezona zinto ziluncedo kakhulu kwiPhepha leWhite iphepha lesichazi-magama. Isichazi-magama kulula ukufikelela kwaye senza ukuba sikhawuleze kwaye singabi nazintlungu ukufumana inkcazo yegama elingaziwayo.
Ukubonisa inkcazo yesichazi-magama segama, cofa ixesha elide (oko kukuthi, cofa ubambe) igama. Igama elikhethiweyo ligqityiwe njengombhalo omhlophe kwimvelaphi emnyama. Xa ukhulula umnwe wakho, inkcazo emfutshane yesichazi-magama yelizwi ivela kwiscreen kwibhokisi ephumayo. Ukucoca inkcazo, cofa naphina ngaphandle kwebhokisi yokungena okanye ucofe u-X kwikona ephezulu ngasekunene.
Ukuboniswa kwenkcazo yedikshinari kwi-Kindle Paperwhite yohlobo lokuqala kusekhohlo; isizukulwana sesibini Kindle Paperwhite isichazi magama senkcazo ukubonisa kungasekunene.
Njengoko kubonisiwe ngasekhohlo kulo mzobo ungasentla, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi, cofa ubonise inkcazo epheleleyo kwaye iphepha lesichazi-magama livula ngolwazi olupheleleyo lwesichazi magama. Cinezela i-icon yangasemva kwibar yesixhobo ukubuyela kwisicatshulwa sakho.
Ukusuka kwibhokisi yenkcazo, unokuqaqambisa igama. Oku kuyigxininisa kwiscreen kwaye kuyigcina nakwincwadi yakho yeNqaku kunye neeMark. Ukufikelela kule fayile, ukusuka kwincwadi, cofa Imenyu → Jonga iiNqaku kunye neManqaku. Cinezela i-icon yangasemva ukuze ubuyele kwisicatshulwa sencwadi yakho.
Kwibhokisi yenkcazo kwisizukulwana sesibini Kindle Paperwhite (njengoko kubonisiwe ngasekunene kulo mzobo ungasentla), phawula iithebhu ezimbini ezongezelelweyo: i-X-ray kunye ne-Wikipedia. Thepha X-Ray ukubonisa ulwazi olongezelelweyo malunga negama elikhethiweyo. Ngokunjalo, ukuba isixhobo asikho kwimowudi yenqwelomoya, ungacofa u-Wikipedia ukuvula iphepha leWikipedia ngolwazi malunga negama olikhethileyo. Qaphela ukuba ulwazi olunikezwe zizixhobo ezintathu lunokufana.
cor 136 pink pill street ixabiso
IX-Ray ayisebenzi kuzo zonke iincwadi kwaye ayisebenzi kuwo onke amagama. Xa kunjalo, ukhetho luya kubonakala lufiphele.
indlebe ye-neomycin yehla ngendlebe ezivaliweyo
Emazantsi esibini-isizukulwana Kindle Paperwhite definition ibhokisi kukhetho ezimbini ezongezelelweyo: Khangela kunye nokunye. Cofa uPhendla ukubonisa imenyu eboniswe kulomfanekiso ulandelayo. Unokukhetha ezintathu: Le Ncwadi ikhangela igama kwincwadi yangoku, Zonke iZibhalo zikhangela igama kwi-Kindle Paperwhite, kunye neVenkile yohlobo zifumana zonke izihloko ezinelizwi- ayikhangeli wonke umzekelo wegama Ivenkile yohlobo!
Ibhokisi yenkcazo ikwabandakanya iqhosha elingaphezulu. Cinezela elo qhosha ukubonisa iscreen.
Ukhetho olungakumbi lokubonisa kwisizukulwana sokuqala Kindle Paperwhite ngasekhohlo; isizukulwana sesibini Kindle Paperwhite Okuninzi okukhethiweyo ukubonisa kungasekunene.
Kuxhomekeke kuguqulelo lwe-Kindle Paperwhite eyeyakho, unokukhetha oku kulandelayo:
Khanyisa Gqamisa igama kwiscreen. Qaphela ukuba xa igama libonakalisiwe, ukhetho kwi Okunokukhethwa kuko kwimenyu luyatshintsha ukuCima. Olu khetho lususa ukuqaqanjiswa, hayi igama.
Yabelana: Yabelana ngegama (kunye nalo naliphi na inkcazo ofuna ukulifaka) kwiiGoodreads (oku kusebenza kwisizukulwana sesibini Kindle Paperwhite) kwaye, ukuba uyafuna, uFacebook noTwitter. Yazisa izihlobo zakho ukuba ulumke kangakanani!
Yongeza Qaphela: Yongeza inqaku malunga nelizwi. Inqaku liya kufakwa kwifayile yakho yaManqaku kunye neeMarko.
Isichazi magama: Fumana inkcazo yesichazi-magama segama, njengangaphambili.
IWikipedia: Jonga ungeno lweWikipedia, ebonelela ngengxoxo eneenkcukacha enegama, hayi inkcazo kuphela. Qaphela ukuba i-wireless kufuneka ibonakalise ukungena kwe-Wikipedia.
Inguqulelo: Guqula igama lisuke kwisiNgesi liye kolunye lweelwimi ezili-16, kubandakanya isiTshayina, isiHindi, nesiNorway. Unokuguqula ukusuka kwezinye iilwimi ukuya kwisiNgesi. Umzekelo, ukuba incwadi inebinzana lesiSpanish, unokufumanisa ukuba liyayifuna. I-Kindle Paperwhite iya kugqiba ukuba ikwenzele ntoni ulwimi.
Isichazi-magama esivulekileyo: Vula isichazi-magama esingagqibekanga kwinkcazo yegama. Ngale ndlela, unokufunda inkcazo eneenkcukacha okanye uhambe ngokukhawuleza ungene kumangeniso aqhagamshelekileyo.
iziphumo ezibulalayo ze-lisinopril
Xela impazamo yomxholo: Xela iimpazamo, ezinje nge typos, ukufomatha, okanye ezinye iingxaki ngqo kwiAmazon. Ngaba igama lipelwe kakubi okanye kusetyenziswa iziphumlisi ezingachanekanga? Nali ithuba lakho lokukuxela. IAmazon yenze umzamo odibeneyo wokuba nabapapashi balungise iimpazamo kwii-Kindle Editions zabo ukuze abafundi bafumane ezona ncwadi zisemgangathweni zifumanekayo.
I-Kindle Paperwhite inezichazi-magama ezimbini: okungagqibekanga, Isichazi-magama esitsha saseOxford American kwaye I-Oxford Dictionary yesiNgesi (Zombini zivela e-Oxford University Press). Ungasitshintsha isichazi-magama esingagqibekanga ngolu hlobo lulandelayo:
Thepha Imenyu → Useto.
Cofa uKhetho lweSixhobo → uLwimi kunye nezichazi magama → izichazi magama.
Isichazi-magama esisebenzayo siyavela.
uthini umahluko phakathi kwexanax kunye neklonopin
Cofa isichazi-magama esisebenzayo ukutshintsha kwisichazi-magama esahlukileyo.
Uluhlu lwezichazi-magama ezikhoyo ezigcinwe kwisixhobo luyavela.
Guqula isichazi magama ngokuthepha iqhosha lerediyo ekunene.
Iqhosha lerediyo elenziwe mnyama (ligcwalisiwe) libonisa ukuba sisiphi isichazi-magama esikhethwe njengekhoyo.
Igcinwe kwifayile yakho ye- Uhlobo lweThala leencwadi Kwiakhawunti yakho yeAmazon kukho izichazi magama ezininzi zolwimi lwangaphandle, kubandakanya iSpanish, isiFrentshi kunye nesiPhuthukezi. Unako ukuhambisa nasiphi na isichazi magama kwiPhepha lakho elimhlophe eliphepha. Ukuba utshintsha ulwimi, isichazi-magama solwimi esihambelanayo siba sesokungagqibeki. Qaphela ukuba awuyi kubona izichazi magama ukuba ujonga ilifu kwiPhepha lakho loPhepha loPhepha; Kuya kufuneka uye kwiLayibrari yakho yohlobo.
yintoni i-advil equlathe
I-ssd 1 yesilivere yesaladiadi cream
ukapteni morgan utyhile iiresiphi zerum
ukulungisa indlela yehenjisi yomnyango
Imetformin hcl 1000 mg
isinyithi senkomo kunye newayini